Movie | My Burmese Blog
Posts in Category: Movie	Symphony in Trailers
On July 10, 2012	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Movie, Music	ဘလော့ဂျ မရေးဖွဈတာလဲ အတျောကွာသှားပါတယျ။ မိုးရာသီမှာ အပငျြးကွီးတတျတာရယျ မိုးမိပွီး ဖြားတတျတာလဲ ပါတယျ လြောကျသှားနတောလဲ ပါလို့ မရေးဖွဈတာကွာတဲ့ ဘလော့ဂျပွနျစပါတယျ။ ဘာရေးရငျ ကောငျးမလဲဆိုတော့ ဒီရကျပိုငျး trailer music တှေ ဓာတျကနြတေော့ အဲဒီအကွောငျးပဲ ရေးဖွဈပါမယျ။ အရငျကတညျးက trailer တှေ စုတတျတဲ့ဝါသနာ ရယျ ကွျောငွာ အိုငျဒီယာ ကောငျးရငျ စုထားတတျတာကွောငျ့ အဲဒီက symphony orchestra သံတှေ တဈရကျလိုကျရှာဖွဈပါတယျ။
Movie, Music	Continue Reading
On December 24, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Movie	ဒီရကျပိုငျး အလုပျမြားနတောကော၊ ပငျြးနတောပါရောပွီး ဘလောဂျမှာ ဘာမှ အသဈမတငျဖွဈပါဘူး။ ဒီနတေ့ော့ ဘာရယျမဟုတျပဲ ဖတျမိတဲ့ သတငျးလေးကွောငျ့ ဘလော့ဂျထရေးပါတယျ။ အမှနျတော့ ဒီနေ့ Miss Christmas မျောဒယျပွိုငျပှဲရိုကျဖွဈပမေယျ့ မတငျတော့ပါဘူး။ ဒီညပွနျရောကျတော့ ကွညျ့မိတယျ နောကျနှဈမှာ အသဈထှကျတော့မယျ့ Batman ~ The Dark Knight Rises trailer ကွညျ့မိတာကွောငျ့ ပွနျ share လုပျပါတယျ။ ဒီကားက အခုမှ Trailer No #2 ကို iTunes Movie Trailler မှာ တငျခဲ့တာပမေယျ့ ၂၄ နာရီအတှငျးမှာ 12.5 Million download လုပျခဲ့တာမို့ record စာရငျးဝငျပါဖွဈသှားပါတယျ။ Movie	Continue Reading
On March 25, 2011	by Htoo Tay Zar	With	3 Comments	- Movie	Marvel ရဲ့ နာ​မညျကြျော ကာ​တှနျး​စာအုပျ ဇာတျ​ကောငျ Captain America : The First Avenger ကို လူ​နဲ့ ရိုကျ​ထား​တဲ့ ကား မ​ကွာ​ခငျ​ထှကျ​ပါ​တော့​မယျ။ ထှကျ​မယျ​လို့ လဲ အရငျ​ကတညျးက​ထငျ​ပွီး​သား​ပါ ဘာ​လို့​လဲဆို​တော့ ပွီး​ခဲ့​တဲ့ နှဈ​အစော​ပိုငျး​မှာ ထှကျ​ခဲ့​တဲ့ Iron Man2ဇာတျ​ကား​ထဲ​က ဇာတျ​ဝငျ​ခနျး​မှာ Captain America ရဲ့ ဒိုငျး​ကွီး မွငျ​လိုကျ​ရ​တာ​ကိုး။ ဒီ​တဈ​ခါ​လဲ Paramount က ရိုကျ​တာ​ဖွဈ​ပါ​တယျ။ လောလောဆယျ trailer ကွညျ့​တာ​တော့ တျောတျော​မိုကျ​သ​ကိုး တကယျ​ထှကျ​လာ​မှ ကောငျး​မ​ကောငျး စောငျ့​ကွညျ့​ရ​ဦး​မယျ။ July 22 ထှကျ​မယျ​လို့ ပွ​သှား​တာ​တှေ့​ပါ​တယျ။ Movie, Trailer	Continue Reading
Naruto Shippuden Cosplay Collections!!
On July 26, 2010	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Design, Movie	Cosplay ဆိုတာက cartoon, games တွေထဲက ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ ပုံစံတူလိုက် ၀တ်တဲ့ပွဲတော်မျိုးတစ်ခုပါ။ အထူးသဖြင့် japan Manga, Anime ထဲက characters တွေကို လုပ်ကြတာများပါတယ်။ အခုတလောတော့ ကျွန်တော်လဲ နေမကောင်းတာနဲ့ သူငယ်ချင်းဆီက ကူးလာတဲ့ Naruto Shippuden ဆိုတဲ့ Japan Anime ထိုင်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ကြည့်ရင်းနဲ့စွဲသွားတာ နေ့ကြည့်ညကြည့်နဲ့ နေတောင်မကောင်းဘူး Blog ကလဲကျော်မရလို့ အင်တာနက်တောင် မသုံးဖြစ်တာ.. အခုမှ အဆင်ပြေလို့ ပြန်သုံးဖြစ်ပါတယ်။
Cartoon, Manga, Movie	Continue Reading
Kid From The Movie UP
On May 18, 2010	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- funny, Movie	Disney ~ Pixar ရဲ့ ကားတွန်းကား UP ထဲက ဖက်တီး ကလေးလေး (Russle) ပုံနဲ့ တူလို့ ပြန်တင်ထားလိုက်ပါတယ်။ တကယ် ကာတွန်းကားထဲက အတိုင်းပဲ တော်တော် တူတာ.. ကျန်တာဆိုလို့ အဖိုးကြီး ပုံတူ မရှိတာရယ် အမွေးစုတ်ဖွားခွေးမရှိတာ ပဲကွာတယ်.. အပေါ်ပုံက ဒီကနေ တွေ့လို့ ယူထားပါတယ်.. အခုအောက်ကပုံကတော့ iPhone app တစ်ခုက ရထားတာ facebook မှာတောင် တင်လိုက်သေးတယ်။ တွဲပြီး ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ Adventure is Out There…. !!
funny, Movie	Continue Reading
On May 4, 2010	by Htoo Tay Zar	With	3 Comments	- Movie, music video	Kick Ass က Marvel က comic books ကို ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ အခု ရုံတင်နေပြီ.. Movie Poster တွေကြည့်လိုက်ရင် အခုခေတ်စားနေတဲ့ Super Hero ကားတွေမျိုးပဲထင် စရာပါပဲ။ အမှန်ကတော့ မဟုတ်ပါဘူး သာမန် ချာတိတ်တွေ super heroes style လုပ်ကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးပါ။ လောလောဆယ် Iron Man2နဲ့ အပြိုင်ရုံတင်နေတယ်။
Movie	Continue Reading
On April 23, 2010	by Htoo Tay Zar	With	8 Comments	- Movie, Music	ပြည့်သူတရားရှင် ပေါင်ချိန် (Justice Bao) ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်က ကျွန်တော် ၅ တန်းလောက်က မြဝတီ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ ပြခဲ့တဲ့ တရုတ် ဇာတ်လမ်းတွဲပါ။ ဒီနေ့မှ Bao ဆိုတဲ့ အကြောင်း အွန်လိုင်းမှာ ထိုင်ရှာဖြစ်တယ်။ ရှာဖြစ်တာကလဲ သီချင်းနားထောင်မိရာကနေ ရှာဖြစ်တာပါပဲ။ သီချင်းနာမည်က New Butterfly Dream လို့ အင်းကလိပ်လို အဓိပ္ဗါယ်ရတဲ့ သီချင်းပါ။ YouTube မှာ နားထောင်ဖြစ်တယ်။ Movie	Continue Reading
On April 22, 2010	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- Movie	Astoria Scum River Bridge ဆိုတဲ့ ဗီဒီယို အတိုလေး ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ကြည့်ဖြစ်တာ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ Vimeo မှာ တင်ထားတာတွေ့တာပါ။ Documentary ဇာတ်လမ်းပုံစံမျိုးလေး… Astoria ဂုံးတံတား အောက်ဖက်က ပိုက်ပေါက်ပြီး ရေစိမ့်နေတဲ့ နေရာမှာ လူ ၂ ယောက်က တံတား အသေးလေး တစ်ခု ဆောက်ပေးထားတဲ့ အကြောင်းရိုက်ထားတယ်။ Movie, Video	Continue Reading
Resident Evil ~ Afterlife
On April 13, 2010	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- Movie	Movie အသစ် trailer ကြည့်မိလို့ ပြန်တင်တာပါ။ Umbrella Corporation ရဲ့ virus ပြသနာ အကြောင်း ရိုက်ထားတဲ့ Resident Evil ကားပါ။ အခုကတော့ အပိုင်း ၄ ရောက်သွားပြီး Afterlife လို့ နာမည်ပေးထားတယ်။ အရင် Alice သရုပ်ဆောင်တဲ့သူပဲ ပြန်ပါပါတယ်။ အခုက အပိုင်း ၄ ဆိုတော့ တကယ့် ဂိမ်းသာဆိုရင်တော့ PS2 version ဖြစ်သွားပြီပေါ့။
The Clash Between God And Titan
On April 3, 2010	by Htoo Tay Zar	With	3 Comments	- Movie	ဒီနေ့ Clash Of The Titan ဆိုတဲ့ ကားကို ပိုက်ဆံ သိပ်မရှိဘဲ သွားကြည့်ဖြစ်တယ်။ 3D နဲ့ ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်.. ဒီကားကို ရုံတင်တာက 1 ရက်နေ့က စတင်တာပါ2ရက်နေ့မှာ ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒီမှာသာ ၁ ရက်နေ့ကတည်းက ရုံတင်ပေမယ့် US မှာ ၂ ရက်နေ့မှ စတင်ပါတယ်။ မင်းသားက Avatar ထဲက မင်းသား Sam Worthington ပါပဲ။ ဒီကားကို အရင်နှစ်ကုန်ခါနီးလောက်ကတည်းက trailer ကြည့်ပြီးကတည်းက ကြည့်ချင်နေတာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Greek ဒဏ္ဏာရီကို အခြေခံထားလို့ပါပဲ။